Ifulethi elinesitayela esinombono ohlukile wasolwandle !! - I-Airbnb
Ifulethi elinesitayela esinombono ohlukile wasolwandle !!
Le Relecq-Kerhuon, Bretagne, i-France
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Vincent
Indawo eyingqayizivele yaleli fulethi elinomhlobiso wezimboni / wesimanje ngaphambili kwamanzi. Okusanda kulungiswa ngokunambitheka ngo-2015/2016 uzojabulela umbono omangalisayo wetheku lase-Brest kanye ne-marina yalo. Konke ukunethezeka nokufudumala kuleli fulethi kuzokuyenga ngokuqinisekile futhi uzobe usekhaya lapho. Itholwe ngaphansi kwemizuzu eyi-10 ukusuka enkabeni yedolobha laseBrest, ngaphansi kwemizuzu emi-5 ukusuka emigwaqweni esheshayo nemizuzu eyi-10 ukusuka esikhumulweni sezindiza nasesiteshini sesitimela !!
Indawo eyingqayizivele yaleli fulethi elinomhlobiso wezimboni / wesimanje. Uzojabulela umbono omangalisayo wetheku laseBrest kanye ne-marina yalo. Itholwe ngaphansi kwemizuzu eyi-10 ukusuka enkabeni yedolobha laseBrest, ngaphansi kwemizuzu emi-5 ukusuka emigwaqweni esheshayo nemizuzu eyi-10 ukusuka esikhumulweni sezindiza nasesiteshini sesitimela !!
Akungabazeki ukuthi uzokwazi ukujabulela ukuhlala kwakho.
NB: ngenza isinqumo hhayi ukubeka wokuhlanza izindleko ngoba mina cabanga ngomoya Airbnb futhi wamukelekile kwabantu kangangokuthi ngizizwe ngisekhaya ngakho ngiyilindele ukubuya ukuthi mina izobuyiselwa izindawo njengoba behamba ngesikebhe base ezihlongozwayo. Ngicela usihloniphe lesi simo somqondo
Lesi sifunda sinengadi yasendaweni enhle kakhulu eneRade de Brest kanye nolwandle lwayo lwaseMoulin Blanc olungaphansi kwefulethi. Ngezansi uzothola indawo yokubhaka kanye nebha enethala
Impela ngingaba onakho ukukweluleka ngesifunda, ukuvakasha kanye nemicimbi yasendaweni
Hlola ezinye izinketho ezise- Le Relecq-Kerhuon namaphethelo